VLC က Android အတွက် Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Android အတွက် VLC
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် VLC
VLC Media Player ကိုအများဆုံးမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်တွေကစားအဖြစ် discs တွေကို, devices များနှင့်ကွန်ရက်က streaming protocols.This ကို Android ™ပလက်ဖောင်းမှ VLC media player ၏ဆိပ်ကမ်းသောအခမဲ့ open source Cross-platform မာလ်တီမီဒီယာကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ Android အတွက် VLC VLC ၏ desktop ကိုဗားရှင်းကဲ့သို့မည်သည့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်တွေအဖြစ်ကွန်ယက်ကိုစီး, ကွန်ယက်ရှယ်ယာနှင့် drives တွေကိုနှင့် DVD ကို ISOs ကစားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အားလုံးမီဒီယာဖိုင်များကိုဖတ်ရှု• "ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ" 🙂
• "သိုလှောင်" SD ကဒ်များပေါ်တွင်သင်၏အားလုံးမီဒီယာဖိုင်များကိုဖတ်ရှုဖို့🙂
•ဒါကြောင့် device ကိုချိတ်ဆက်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ဘဲ, အ streaming များအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးကွယ်ဖို့နိုင်ရန်အတွက် "အမြင်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှု" လိုအပ်နေပါသည်။
•ဒါကြောင့်ပေါ့ပ်အပ် menu ကိုစတင်ရန် "အခြားအက်ပ်ကျော်ဆွဲ" လိုအပ်နေပါသည်။
•ကိုယ်ကသာက Android ကို TV ဗားရှင်းနဲ့သုံး Android တီဗွီ launcher screen ပေါ်မှာအကြံပြုချက်များသတ်မှတ်ထားဖို့ "startup မှာ run ကို" လိုအပ်နေပါသည်။
အန်းဒရွိုက် 2.0.6 အပေါ် VLC
2.0.6 တစ်ခု update ကို, ပျက်ကျကိုပြုပြင်တာတွေကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကို update နှင့် BT နားကြပ်များအတွက်အသံနှောင့်နှေးချွေတာဖြစ်ပါတယ်။
2.0 အထူးသ, features တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကမိတ်ဆက် ကွန်ယက်ကို disk ကိုကြည့်ရှုခြင်း (Windows မှာရှယ်ယာ UPnP, NFS, SFTP ... ), အကြိုက်ဆုံးဖိုလ်ဒါနှင့် URL များကို, ဗီဒီယိုဖွင့်စာရင်းများကို, ပေါ့ပ်အပ်ဗီဒီယို, အသစ်များကိုခွင့်ပြုချက်ထောက်ခံမှု, download, အပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သစ်တစ်ခုသမိုင်း subtitles ။
တိုင်းကိရိယာ updated Android တီဗွီကြည့်ရနိုင်အောင်က Android TV နဲ့အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများ, ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
16.09 ကို MB
သြဂုတ် 12, 2016
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2017 မှာ 2: 02 ညနေ
Mister ကောင်းတဲ့ကောင်လေး says:
နိုဝင်ဘာလ 20, 2017 မှာ 6: 49 ညနေ
သြဂုတ်လ 3, 2017 မှာ 10: 41 ညနေ
ငါ VLC ကြိုက်တယ်
ဇူလိုင်လ 2, 2017 မှာ 8: 55 နံနက်
အလွန်ကောင်းတဲ့ ... တကယ်ကိုယ့်ဒီ app ကိုကြိုက်တယ်
ဧပြီလ 24, 2017 မှာ 12: 37 ညနေ
ငါ VLC app ကိုအခြားအထက် သာ. ကောင်း၏ထင်
Afriyie Brobbey ခရစ္စတိုဖာ says:
ဧပြီလ 10, 2017 မှာ 9: 26 နံနက်
အလွန်ကောင်းသောနှင့်စူပါ apk ။ ကိုယ့် wooow ooooo ကကြိုက်နှစ်သက်ဎကိုချစ်
အောက်တိုဘာလ 4, 2019 မှာ 9: 31 နံနက်
မတ်လ 22, 2017 မှာ 8: 10 နံနက်
ငါ VLC ကြိုက်တယ်။
မတ်လ 6, 2017 မှာ 10: 43 ညနေ
goooooooooooooood apps များ
ဇူလိုင်လ 4, 2016 မှာ 5: 42 ညနေ
မေလ 3, 2016 မှာ 11: 29 ညနေ
အခမဲ့ app များကိုအတှကျကြေးဇူးတငျ။
မေလ 3, 2016 မှာ 11: 25 ညနေ
အေးမြ apps များ .. ကိုယ့်ကြောင့်ကိုချစ်!
ဧပြီလ 16, 2016 မှာ 2: 42 နံနက်
အေးမြ apps များ .. ငါကချစ်ကြ
မတ်လ 11, 2016 မှာ 8: 32 ညနေ
ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ ... ..I'm အတွက်
Saad Khan က says:
ဇန်နဝါရီလ 29, 2016 မှာ 8: 23 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 29, 2016 မှာ 8: 25 ညနေ
ချုပ် Mquanazy says:
ဇန်နဝါရီလ 16, 2016 မှာ 2: 27 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 14, 2016 မှာ 9: 41 နံနက်
ငါ VLC ANROID ကစားသမားများကဲ့သို့
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2015 မှာ 5: 32 ညနေ
ကိုယ့် MX player ကိုမကြိုက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2015 မှာ 8: 20 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 23, 2015 မှာ 10: 29 နံနက်
ဧပြီလ 11, 2016 မှာ 10: 38 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 14, 2015 မှာ 4: 12 ညနေ